ငှက်ကလေး ခရီးသွား (နိဂုံး) | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
အစ်မချိုသင်းရဲ့စာတွေမှာကျ ဆရာကြီးရဲ့ နေ့စဉ်လူနေမှု
ဖတ်နေရင်း စာရေးသူက သူ့အဖေကို အရမ်းချစ်၊ အရမ်းလွမ်းနေတာကို မြင်နေရတယ်။
ဒီစာရေးတဲ့ အစ်မချိုသင်းရဲ့ အစ်မက စာရေးသေးလား...
မချိုသင်းရဲ့ အမက စာရေးကောင်းတယ်နော် ။အရမ်းလွမ်းသွားတယ် အမရေ
တနေ့ နေ့တချိန်ချိန် လူတိုင်းလျှောက်ရမဲ့လမ်းပေမဲ့
ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေကို ကိုယ့်ထက်အရင် ဒီလမ်းကို မလျှောက်စေချင်တဲ့ဆန္ဒကတော့ အားလုံးမှာ တူတူဘဲ
ငှက်ကလေး ကပြန်မလာတော့မဲ့ ခရီးရှည်ကြီးကို ထွက်သွားနှင့်တယ်။
အမချိုသင်းရေ မမြင်ဖူးတဲ့ ဆရာကြီးဦးတင်မိုးပုံတွေလည်း ကြည့်ရပါတယ်။ အမဖေဖေရဲ့ မွန်မြတ်စိတ်ထားကို လေးစားအားကျမိပါတယ်။
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ချိုသင်း ဖေဖေ ငှက်ကလေးကို
အဓိပ္ပါယ်တွေ ပြည့်ဝလှတဲ့ ကဗျာလေးတွေနဲ့ အတူတူ...
ချိုသင်းတို့ ညီအစ်မတွေနဲ့အတူတူ... လွမ်းသွားပါတယ်...။
စာတွေကောင်းတော့ ချက်ချင်းကော်မန့် မပေးရဲဘူးဗျာ ၊၊ မလေးနက်မှာစိုးလို့ ၊၊ တိတ်တိတ်လေးပဲ ဖတ်သွားပါတယ်ဗျာ ၊၊
ဆရာကြီးတင်မိုး ရိုးရိုးလေးလွမ်းသွားတာကို ဖတ်ရတာ ပိုပြီးလွမ်းစရာပဲနော်...
အမချိုသင်းရဲ့ အမကိုပါ ပုံမှန်စာရေးခိုင်းပါ့လား..
မချိုသင်းရေ.... အိမ်လွမ်းကဗျာတွေ ကြိုက်လို့ ကူးသွားတယ်ဗျာ။
ကျွန်တော်တော့ စာပေဟောပြောပွဲ လွတ်ပြီထင်တယ်ဗျ။ွှTraining camp ကနေ တနင်္လာမှ ထွက်ရမှာ ဆိုတော့လေ...... By force ဆိုတော့လဲ ဘာမှ ပြန်ပြောလို့ မရဘူးဗျ။ စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ ညစ်တယ်ဗျာ။..... ဒေါ်မာမာအေးကို မိတ်ဆက်ပြီး မရှင်းတာလေးတွေ မေးမလို့ ချိန်ထားတာ လွဲပြီဗျာ။
စီပုံးလဲ မတွေ့ဘူးဗျာ ၊၊ လာလည်ပေးတာ ကျေးဇူးဗျာ ၊၊ ဒီမှာပဲ ရေးခဲ့တော့တယ် မMCT ကြီးရေ ၊၊
မမိုးတို့ ညီအမတွေကတော့ ဆရာကြီးသမီးပီသပါတယ်ဗျာ...
ကျနော်တို့ လဲ လွမ်းတာပေါ့...ဒါပေမယ့် ထပ်တူတော့ မမှီနိုင်ပါဘူး.....
အစ်မရေ တူးကတော့ ကော်ဖီပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ်လေး တကြိမ်သောက်ခွင့်ကြုံခဲ့ရလို့ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ “လူကြုံရင် ရွှေပြည်စိုးပဲ ပို့ပေးလိုက်” တဲ့ ဆရာကြီးမှတ်မှတ်ရရ တူးကိုပြောတာလေ။ အဲ့နောက်ပိုင်း ရွှေပြည်စိုးဆေးလိပ်ကို အသည်းအမည်း လိုက်ရှာခဲ့တာပေါ့ ...။ လူလည်းမကြုံခဲ့သလို တူးပို့မယ့် ရွှေပြည်စိုးကိုလည်း ဆရာကြီးသောက်ခွင့်မကြုံခဲ့ဘူး .. ။ အစ်မရဲ့ အစ်မ လက်ကတော့ တကယ်ကိုရွှေချထားဖို့ ကောင်းတာပဲ ... ကြုံရင်ပြောပေးပါနော်။ ပြီးတော့ စာတွေလည်း ဆက်ရေးပါလို့ ...။
တဆက်တည်း အစ်မ .. မဟုတ်ကဟုတ်က လုပ်နေကျ တူးတူးသာရဲ့ထုံးစံအတိုင်း အစ်မကို တက်ဂ်ထားမိပါတယ် .. ဟီဟိ ရေးပေးပါဦးနော် ..။
ချစ်ခင်လျှက် .. ညီမ
kom အတိုင်းပါပဲ၊ စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်။
မီးဖိုချောင်ထဲမှာ သူ အလုပ်များနေတယ်။ သူ့အနား သွားတော့ သူကလည်း ပြန်ကြည့်တဲ့အခါ ကျနော့် လက်ကို ဆန့်ထုတ်လိုက်ပြီး ပြောလိုက် မိတယ်... ”အောင်သာငယ်ပါ..ညီမ.”
kom: ဟုတ်ပါ့ ပြီးရင် အလွမ်းလာသည် အုံးမယ်။ စိတ် ကိုခိုင်ခိုင်ထား။
23 Nov 08, 02:58 PM
mm: မမလှထုံရှိရင် ရီနေရတယ်။ သူကပျော်နေမှာပါလေ။
kom: MCT လူမလစ်သေးဘူးထင်ပါတယ်။ ဧည့်သည်တွေချက်ကျွေးတာ စားနေတယ် နဲ့တူတယ်။
23 Nov 08, 01:08 PM
kom: တို့တော့ဂဓဒိါ်ဂဒီးသွားနေတာဘဲ. ပျော်စရာကောင်းပါတ်ယ
23 Nov 08, 01:00 PM
mm: စင်ကာပူမှာ ၆နှစ်ကျော်နေလာပြီး မလေးရှားတစ်ခါမှ မသွားဖြစ်ဘူး
23 Nov 08, 12:59 PM
mm: kaa ဦးတက်ခါးမေတ္တာဝေတယ်
23 Nov 08, 12:58 PM
(ချက်သလား. ရှူပ်သလား. ကူသလား. မူသလား...စားသလား. ??/) :P
မနှင်းရဲ့ နှလုံးသွေးနဲ့ ရေးတဲ့ ငှက်ကလေးအကြောင်းကို နှလုံးသားနဲ့ ကြည့်ပြီး နှလုံးသားနဲ့ ဖတ်သွားတယ် ချိုသင်းရယ်… ဖတ်အပြီး နှလုံးသားတွေ နွမ်းလျသွားလိုက်တာ… ဒီအဖေ့သွေး ဒီသမီးတွေရဲ့ အနုပညာချမ်းသာကြွယ်ဝပုံကတော့ အံ့မခန်းပါပဲနော်… လွယ်အိတ်လေးလွယ်ပြီး ပုဆိုးလေးဝတ် မြန်မာဆန်ဆန် အပြုံးလေးနဲ့ ချစ်စရာ တို့ တွေရဲ့ ဘဘ(မနှင်းရဲ့ ငှက်ကလေး) အတွက် အလွမ်းတွေက ဘယ်တော့မှ ခမ်းခြောက်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူးကွယ်… တခုတောင်းဆိုပါရစေ… မနှင်းရော ချိုသင်းရော… တခြားအမတွေပါ စာလေးတွေ ဆက်ရေးပေးပါနော်… အလွမ်းတွေသက်သာသွားပြီး အနားမှာ ငှက်ကလေးပျံဝဲလာသလို ခံစားရလို့ ပါ… ချိုသင်းရော မနှင်းကိုပါ ကျေးဇူးပါ….
ဘလော့ဂ်မှာ စာလာဖတ်သူများ နဲ့ ကွန်မန့် ရေးသူများသို့..
ငှက်ကလေး ခရီးသွား ကို ရေးတဲ့ ကျမရဲ့ အမ မိုးမိုးနှင်းက စာဖတ်သူတွေရဲ့ မေတ္တာ စေတနာကို ခံစားရတဲ့အတွက် ကျေးဇူး အထူး တင်ပါကြောင်း စကားပါးလိုက်ပါတယ်။
မနှင်းနဲ့ ထပ်တူ ချိုသင်းကလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မကြာခင် စာပြန်ရေးမယ်ဆိုလို့ မျှော်သူမှာ ပျော်ရပါသည်
မင်္ဂလာပါ မမ မိုးချိုသင်းရေ...
တစ်ခုကို ဖတ်သွားပါတယ် မမရေ..
မနှင်းကိုပြောလိုက်ပါ။ လလော့ရေးပါလို့ ။ ဒါမှ မဟုတ် သူ့ ဘလော့ရှိရင်လည်း လိပ်စာပေးပါအုန်း။
ချိုသင်းပုံ တွေ့ လိုက်တယ်။ မိုးမခမှာ
ရွှေအိုရောင် ရင်ဖုံးနဲ့ ။
မနှင်းပုံလည်း သတင်းစာထဲတွေ့ လိုက်သေးတယ်။ ကြာပြီ။
ညီအမတွေ ကျန်းမာပျော်ရွှင် ကြပါစေ။